Waa kuma Ciise Masiix , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ilaah, Wiilku, waa qofka labaad ee ilaahnimada, oo uu abuuray aabuhu da’ado ka hor. Isagu waa erayga iyo u ekaanta Aabbaha, oo isaga xaggiisa ayuu wax walba uumay. Waxaa laga soo diray Aabaha sidii Ciise Masiix, Eebbe, oo loogu muujiyey jidhka inuu awood inoo siiyo badbaadada. Waxaa helay Ruuxa Quduuska ah oo ku dhashay Maryantii bikradda ahayd - oo isagu wuxuu ahaa Ilaah iyo dhammaan aadanaha, oo leh laba dabeecadood oo isku mid ah. Isaga, Wiilka Ilaah iyo Eebaha Wax walba, waa mudan yahay maamuus iyo cibaado. Sidii badbaadiyaha badbaadinta ee binu-aadmiga, wuxuu u dhintay dembiyadeenna aawadood, oo waxaa laga soo qaaday jirka oo loo aaday xagga jannada, halkaas oo uu ku sameeyo dhexdhexaadiye u dhexeeya nin iyo Ilaah. Wuxuu ku soo laaban doonaa isagoo sharaf leh oo u talin doona quruumaha oo dhan boqortooyadii Ilaah isagoo ah boqorka boqorrada (Yooxanaa 1,1.10.14; Kolosayyiintii 1,15-16; Cibraaniyada 1,3; Yooxanaa 3,16; Tiitos 2,13; Matayos 1,20: 10,36) Matayos 1; Fal 15,3; 4 Korintos 1,8-19,16; Cibraaniyada XNUMX; Muujintii XNUMX).
Masiixiyaddu waxay ku saabsan tahay Masiixa
“Aasaas ahaan, Masiixiyaddu ma ahan nidaam quruxsan, murugsan sida Buddhism, xeerar anshaxeed oo dhan sida Islaamka, ama cibaado wanaagsan sida kaniisadaha qaar ay muujiyeen. Bilowga muhiimka ah ee dood kasta oo ku saabsan mowduucan waa xaqiiqada ah in, sida uu ereygu tilmaamayo, 'Masiixiyadda' gabi ahaanba waxay ku saabsan tahay hal qof, Ciise Masiix (Dickson 1999: 11).
Masiixiyadda, in kasta oo markii hore loo tixgeliyey inay tahay dariiqo Yuhuudi ah, way ka duwanayd diinta Yuhuudda. Yuhuuddu waxay rumaysteen Ilaah, laakiin badidoodu ma aqbalaan Ciise inuu Masiixa yahay. Koox kale oo lagu sheegay Axdiga Cusubi, kuwa jaahilka ah “ilaah baa ka baqa” kaas oo Kornelius uu ku lahaa (Falimaha 10,2: XNUMX), sidoo kale way rumaysteen Ilaah, laakiin mar labaad, dhammaantood ma wada aqbalin Ciise inuu yahay Masiixa.
Qofka Ciise Masiix waa udub dhexaadka fiqiga Masiixiga. In kasta oo 'fiqiga' waxaa lagu qeexi karaa 'ka hadalka Ilaah', 'fiqiga Masiixiga ah' wuxuu siinayaa doorka Masiixa door muhiim ah "(McGrath 1997: 322).
“Masiixiyaddu ma aha wax is-beddel ama fikrado is-waaqici ah leh; waxay bixisaa jawaab joogto ah oo ku saabsan su'aalaha laga soosaaray nolosha, dhimashada, iyo sarakicidda Ciise Masiix. Masiixiyaddu waa diin taariikhi ah oo ka dhalatay iyada oo laga jawaabayo dhacdooyin isdaba joog ah oo diirada saaraya Ciise Masiix ”.
Masiixi ma jiro Ciise la'aan. Kumaad ahayd Ciise cismaan Maxaa isaga ka gaar ah oo Shaydaanku doonayay inuu baabi'iyo oo joojiyo sheekada dhalashadiisa (Muujintii 12,4: 5-2,1; Mt 18-XNUMX)? Muxuu ku saabsanaa isaga oo xertiisii ​​si geesinimo leh u dhiirrigeliyay oo lagu eedeeyay inay adduunka kicinayaan?
Ilaah baa innaga yimid xagga Masiixa
Daraasaddii ugu dambaysay waxay ku dhammaatay adoo xoojinaya in aan kaliya ku ogaan karno Ilaah xagga Ciise Masiix (Mt 11,27:1,3), oo ah kan dhabta ka muuqata jiritaanka Ilaah (Cibraaniyada 1,15: XNUMX). Kaliya Ciise wuxuu ku ogaan karnaa Ilaah inuu yahay, maxaa yeelay Ciise oo keliya ayaa ah muujinta muuqaalka Aabbaha (Kolosay XNUMX:XNUMX).
Injiillada ayaa sharxaya in Ilaah ku soo galay cabbirka aadanaha iyada oo loo marayo shakhsiga Ciise Masiix. Rasuul Yooxanaa wuxuu qoray: “Bilowgii waxaa jiray Ereyga, Ereyguna wuxuu la jiray Ilaah, Ilaahna wuxuu ahaa Ereyga" (Yoh 1,1). Ereyga waxaa loo aqoonsaday inuu yahay Ciise kii “jidh noqday wuuna na dhex degay” (Yooxanaa 1,14:XNUMX).
Ciise, Erayga, waa qofka labaad ee Ilaahnimadu, kaas oo “buuxnaanta Ilaahu ku nool yahay” (Kolosay 2,9: 1,19). Ciise wuxuu ahaa aadanaha iyo Ilaah, Wiilka Aadanaha iyo Wiilka Ilaah. "Maxaa yeelay, Ilaah waa ka farxay in kulli wanaagga oo dhan ay isaga ku dhex jiraan" (Kolosay 1,16:XNUMX), "oo kulli inteen le'eg waxaan ka helnay nimco xagga naxariista" (Yooxanaa XNUMX:XNUMX).
“Masiixa Ciise, oo qaab cibaado leh, uma u qaadanin inuu wax booli ah la mid yahay Ilaah, laakiin wuu is-hoosaysiiyey oo qaatay qaab addoonkaaga, waxaa loo aqoonsaday inuu yahay bini aadam oo muuqda sida aadanaha. (Filiboy 2,5-7) ). Qaybtani waxay sharraxaysaa inuu Ciise iska sii daayay sifooyinka ilaahnimadiisa isla markaana noqday mid inaga mid ah sidaa darteed “kuwa magiciisa rumaystaa waxay xaq u leeyihiin inay noqdaan carruurtii Ilaah” (Yooxanaa 1,12:2001). Anaga qudhayduba waxaan aaminsanahay inaan shaqsi ahaan, taarikh ahaan iyo taariikh ahaan baanu la kulanay ilaahnimadiisa ilaahay ee aadanaha qofkan khaaska ah, Ciise reer Naasared (Jinkins 98: XNUMX).
Markii aan la kulano Ciise, waxaan la kulannaa Ilaah. Ciise wuxuu yidhi: "Haddaad i garaneen, isaguna waad garateen aabbada" (Yooxanaa 8,19:XNUMX).
Ciise Masiix waa abuuraha iyo wax walba daryeela
Marka laga hadlayo “Ereyga,” John wuxuu noo sharxayaa in “wax la mid ah bilowgii Ilaah la jiray. Wax walba isagaa sameeyey, oo isku si bay u jiraan, oo wixii la sameeyeyna lama sameeyo ”(Yooxanaa 1,2: 3-XNUMX).
Bawlos wuxuu sii wadaa fikradan: "... wax walba isagaa lagu uumay isaga iyo isaga" (Kolosay 1,16:2,9). Warqadda Cibraaniyada waxay sidoo kale ka hadlaysaa “Ciisena wuxuu waxyar ka yaraa malaa'igaha” (taasi waa nin, wuxuu u noqday nin) “wax waluba waa kan oo wax waluba isagay ku jireen” (Cibraaniyada 10: 1,17-1,3). Ciise Masiix "wax walba wuu ka sarreeyaa wax walbana isagay ku jiraan" (Kolosay XNUMX:XNUMX). Wuxuu “wax walba ku qaataa eraygiisa xoogga” (Cibraaniyada XNUMX: XNUMX).
Hogaamiyaasha yuhuudda ma aysan fahmin dabeecadiisa rabbaaniga ah. Ciise wuxuu u sheegay: "Waxaan ka imid xagga Ilaah" iyo "kahor intuusan Ibraahim noqon waxaan ahay" (Yooxanaa 8,42.58). “WAA AYAAN” waxaa loola jeedaa magaca uu Ilaahay naftiisa u adeegsaday markuu la hadlay Muuse (Baxniintii 2:3,14), taasina waxay keentay in Farrisiinta iyo qareennada ay dhagxiyaan dhagxaan darteed sheegashadaas darteed oo loo sarraysiiyay inay tahay ilaahnimo (Yoon 8,59).
Ciise waa wiilkii Ilaah
Yooxanaa wuxuu wax ka qoray Ciise: "Waxaan aragnay ammaantiisii, taas oo ahayd ammaanta keliya ee ka timaadda Aabbaha, oo nimco iyo run ka buuxa" (Yooxanaa 1,14:XNUMX). Ciise wuxuu ahaa wiilka keliya ee aabbaha.
Markii Ciise la baabtiisay, Ilaah baa u yeedhay isaga: "Adigu waxaad tahay wiilkayga aan jeclahay, waan kugu faraxsanahay" (Mk 1,11:3,22; Lk XNUMX).
Markay Butros iyo Yooxanaa arkeen aragti ku saabsan Boqortooyada Ilaah, Butros wuxuu u arkay Ciise inuu la mid yahay Muuse iyo Eliyaas. Ma uusan ogayn in Ciise "uu ka mudan yahay ammaan ka sii badan tii Muuse" (Cibraaniyada 3,3: 17,5), iyo in qof ka weyn nebiyada uu dhexdoodii ku jiray. Oo cod baa samooyinka ka yimid oo yidhi, Kanu waa wiilkayga aan jeclahay ee aan jeclahay oo aan jeclahay. Waa inaad maqashaa! ”(Mt XNUMX). Sababtoo ah Ciise waa Wiilka Ilaah, waa inaan sidoo kale maqalnaa wuxuu leeyahay.
Tani waxay ahayd marinka udub dhexaadka ku dhawaaqa rasuulladu markay faafiyayaan injiilka badbaadada ee Masiixa. Xusuusnow Falimaha Rasuullada 9,20:1,4, meeshuu Saa'uul ka sheegay kahor intaan loo aqoon Bawlos: “Oo markiiba wuxuu ku dhex wacdiyey sunagogyada Ciise inuu yahay Wiilka Ilaah.” Ciise “waxaa loo magacaabay sida Ruuxa qoduus ka dhiga, sidii wiilkii Ilaah oo xoog leh xagga sarakicidda kuwii dhintay (Rooma XNUMX: XNUMX).
Allabariga wiilka Ilaah wuxuu rumaystayaasha u oggolaadaa inay badbaadaan. "Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay in kuwa isaga rumaystaa oo aan lumin laakiinse ay lahaadaan nolosha weligeed ah" (Yooxanaa 3,16:1). “Aabbuhu Wiil buu u diray inuu noqdo Badbaadiyaha dunida” (4,14 Yooxanaa XNUMX:XNUMX).
Ciise waa Sayid iyo Boqor
Markuu Masiixu dhashey, malaa'igtii waxay ku dhawaaqday fariintan soo socota adhijirrada: "Badbaadiye ayaa maanta kuu dhashay, oo isagu waa Masiixa Rabbiga ah magaaladii Daa'uud" (Luukos 2,11:XNUMX).
Hawsha Yooxanaa Baabtiisaha waxay ahayd "diyaarinta jidka Rabbiga" (Mk 1,1-4; Joh 3,1-6).
Hadaladiisa hordhaca ah ee waraaqaha kala duwan, Bawlos, Yacquub, Butros iyo Yooxanaa waxay u gudbiyeen “Rabbi Ciise Masiix” (1 Korintos 1,2: 3-2; 2,2 Korintos 1,2: 1,1; Efesos 1: 1,3; Yacquub 2: 3; Pt XNUMX: XNUMX; XNUMXJoh XNUMX; iwm.)
Ereyga Sayidku wuxuu muujinayaa xukunkiisa dhamaan dhinacyada iimaanka iyo nolosha ruuxiga ah. Muujintii 19,16:XNUMX waxay ina xusuusineysaa in Ereyga Eebbe, Ciise Masiix,
"Boqorka boqorrada iyo Sayidka sayidyada"
Buugga Marti-qaadka Fiqiga, fiqiga casriga ah ee Michael Jinkins wuxuu dhigayaa sidan: “Sheegashadiisa annaga waa dhammaystiran oo dhammaystiran. Waxaan ku nahay qalbi ahaan, jir ahaan iyo naf ahaanba, nolosha iyo dhimashaba xagga Rabbi Ciise Masiix ”(2001: 122).
Ciise waa Masiixa oo la sii sheegay, badbaadiyaha
Daanyeel 9,25:1,41 Ilaah wuxuu ku dhawaaqay in Masiixa Amiirku u imaan doono inuu dadkiisa badbaadiyo. Masiixa macnaheedu waa "mid subkan" oo Cibraani ah. Andrew, oo ahaa kii raacsanaa ee Ciise, wuxuu gartay inuu isaga iyo xertiisii ​​kaleba "ku arkeen Masiixa" ciise, oo laga soo tarjumay Griig sida "Masiixa" (subkan) (Jn XNUMX:XNUMX).
Waxsii sheegid badan oo Axdiga Hore ah ayaa ka hadlay imaatinka badbaadiyaha. Xisaabtiisii ​​dhalashadii Masiixu, Matayos wuxuu si isdaba joog ah uga warramayaa sida waxsii sheegyadaan ku saabsan Masiixa loo fuliyay nolosha iyo shaqada Wiilkii Ilaah, oo si mucjiso ah Ruuxa Quduuska ah ku helay gabadh bikro ah oo la odhan jiray Maryan oo loogu yeedhay Ciise markuu nin noqday. wuxuu noqday waxa badbaadiye macnaheedu yahay. Laakiin waxaas oo dhan waxay ahaayeen in la arko wixii Rabbigu kaga dhex hadlay nebiga, (Sayax 1,22:XNUMX).
Luukos wuxuu qoray: "Wax kasta oo la qoro waa inay ku rumoobaan sharciga Muuse, nebiyadii iyo sabuurradii" (Lukos 24,44:8,29). Waxay ahayd inuu la kulmo saadaasha Masiixa. Wacdiyadii kale waxay marag ka yihiin in Ciise yahay Masiixa (Mk 2,11; Lk 4,41; 9,20; 6,69; Jn 20,31; XNUMX).
Masiixiyiintii ugu horreeyay ayaa baray “Masiixu waa inuu xanuunsadaa oo isagu kan ugu horreeya ee kuwa dhintay ka soo sara kac oo iftiinka u muujiya dadkiisa iyo dadka aan Yuhuudda ahayn” (Falimaha Rasuullada 26,23:4,42). Si kale haddii loo dhigo, in Ciise yahay "runtii Badbaadiyaha Dunida" (Yooxanaa XNUMX:XNUMX).
Ciise wuxuu ku soo noqdaa naxariis iyo xukun
Masiixiyiinta, sheekada oo dhami waxay horseedaysaa kana qulqulaysaa dhacdooyinka nolosha Masiixa. Sheekada noloshiisu waxay udub dhexaad u tahay diinteena.
Laakiin sheekadan ma dhamaan. Waxay sii socotaa laga bilaabo wakhtiga Axdiga Cusub illaa daa'in. Baybalku wuxuu sharraxayaa in Ciise ku nool yahay noloshiisa innaga, iyo sida uu taas u falanqeeyo casharka soo socda.
Ciise sidoo kale wuu soo noqon doonaa (Yooxanaa 14,1: 3-1,11; Falimaha Rasuullada 1:4,13; 18Th 2: 3,10-13; 9,28Pt 4,16: 17,31-3,20, iwm). Uma uu soo noqon karo inuu la macaamilo dembiga (oo uu hore ugu sameeyay allabarigiisa) laakiinse wuxuu u yimid badbaadada (Cibraaniyada XNUMX). Isaga "carshigiisa nimcadiisa" (Cibraaniyada XNUMX:XNUMX) "Isagu wuxuu dunida ku xukumi doonaa xaqnimo" (Falimaha Rasuullada XNUMX:XNUMX). “Laakiin xuquuqdayada madaniga ah waxay ku jirtaa jannada; Meel kasta oo aan ka rajeynayno Badbaadiye, waa Rabbi Ciise Masiix ”(Filibos XNUMX).
Qorniinku wuxuu daaha ka qaadayaa Ciise inuu yahay Eraygii jidh ka dhigay, oo ah Wiilka Ilaah, Eebaha, Boqorka, Masiixa, Badbaadiyaha dunida, oo mar labaad u iman doona inuu naxariis u muujiyo iyo weliba xukunka. Waxay udub dhexaad u tahay aaminsanaanta Masiixiyada maxaa yeelay Masiixu la'aantiis Masiix ma jiro Masiixiyiin. Waa inaan maqalnaa waxa uu inoo sheegayo.